बाढीका बेला खोलापारि खोप तार्ने जुक्ति (भिडिओ) :: युवराज श्रेष्ठ :: Setopati
बाढीका बेला खोलापारि खोप तार्ने जुक्ति (भिडिओ)
हिमालपारि मुस्ताङमा ५५ वर्षमाथिका नागरिकलाई १ असारमा कोरोनाभाइरसविरूद्धको दोस्रो डोज खोप लगाउने कार्यक्रम थियो।
खोप लगाउने दिन बिहानसम्म थासाङ गाउँपालिका वडा नं. १ टुकुचे र २ कोबाङमा खोप पुगेको थिएन। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले थासाङ-४ लेते को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म खोप पुर्‍याइदिएको थियो।
गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक सीताराम कार्कीले असार १ गते बिहानै खोप लिन आउन टुकुचे र कोबाङका स्वास्थ्यचौकी प्रमुखलाई आग्रह गरे। तर उनीहरूसँग गाडी थिएन। वडा कार्यालयको मोटरसाइकल मागेर टुकुचे स्वास्थ्य चौकीका अहेब सविन खत्री र कोबाङ स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्य सहायक लालबहादुर रोकाया खोप लिन लेतेतर्फ लागे।
बाटोमा पर्ने छाक्ताङ खोला तर्न सक्ने अवस्था थिएन। खोलामा आएको बाढीले वारि र पारि दुबैतर्फ गाडी रोकिएका थिए। गाडी तर्न नसक्ने बाढीमा मान्छे तर्न सक्ने कुरा पनि भएन। गाउँपालिकाको गाडीमा ल्याइएको खोप खोलापारि अड्किएको थियो भने खोप लिन मोटरसाइकलमा गएका सविन र लालबहादुर वारि अड्किए।
पारि गाउँपालिकाको गाडीमा ड्राइभरमात्रै थिए। जिल्लाव्यापी चल्न लागेको खोप अभियान आफ्नो स्वास्थ्य चौकीमा नरोकियोस् भनेर उनीहरूले खोप तार्ने उपाय खोजे। छाक्ताङ खोलामै केही माथि पक्की पुल बनाउँदै गरेको दृश्य देखे। उनीहरूले त्यहींबाट एउटा लामो फलामको डन्डी ल्याए।
डन्डीमा खोप झुन्ड्याएर सवारी चालक गगन बिकले डन्डीको एउटा छेउ खोलापारितर्फ ताके। उनले धान्न सकिञ्जेल डन्डी पारितिर लगे। वारी कोबाङका स्वास्थ्य सहायक लालबहादुरले डन्डी समाते।
‘फलामको डन्डीसँगै खोप पनि पारी तार्‍यौं,’ टुकुचेका अहेब सविनले भने, ‘यसरी खोप लगेर गाउँका जेष्ठ नागरिकलाई खोप लगायौं।’
यसरी खोप लगेर बिहान १० बजेदेखि नै खोप लगाएको उनले बताए।
मुस्ताङमा कोरोनाविरूद्धको पहिलो डोज खोप फागुन २३ र २४ गते लगाइएको थियो। टुकुचेमा ५५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकले पहिलो डोज ६० जनाले लगाएका थिए। अहिले दोस्रो डोज ६४ जनाले लगाए। थपिएका ४ जना यसअघि मुस्ताङ बाहिर बसेका नागरिक रहेका छन्। जसले पहिलो डोज खोप लगाइसकेका थिए।
टुकुचे र कोबाङ लैजान बाढी बगेको खोलाबाट खोप तार्दै गरेको भिडिओ अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। उक्त भिडिओ टुकुचेका अहेब सविनले खिचेका थिए।
‘मैले नै खिचेको हो, त्यो भिडिओ’, सविनले भने, ‘यसरी भाइरल होला भनेर सोचेकै थिइनँ।’
खोप लगेपछि सविनले स्वास्थ्य चौकीका अनमी एन्जिला थकालीलाई देखाए।
‘हामीले यसरी दु:ख गरेर खोप तारेम् नि सिस्टर’, सविनले एन्जिलालाई भने। एन्जिलाले यस्तो दु:ख गर्नुभएछ भन्दै भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा राख्न आग्रह गरिन्, सविनले मानेनन्।
‘भोलि नेगेटिभ कमेन्ट आउला, खोप खसेर बगाएको भए के हुन्थ्यो? प्रश्न उठ्ला भनेर उहाँले भिडिओ राख्न मान्नुभएन’, एन्जिलाले सेतोपाटीलाई भने, ‘त्यसो भए म राख्छु, परेको पनि मै बेहोर्छु भनेर मैले टिकटकमा भिडिओ राखिदिएँ।’
सविन र लालबहादुरले पानीमा भिज्दै बाढी उर्लेको खोला तारेर खोप स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याएको एन्जिलाले बताइन्।
मुस्ताङमा पहिलो र दोस्रो दुबै डोज कोभिशिल्ड खोप लगाएको सविनले बताए। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख टीकाराम भण्डारीका अनुसार अहिलेसम्म मुस्ताङका १ हजार ४०५ जनाले दुबै डोज खोप लगाइसकेका छन्। खोप पाउने सबैजना ५५ वर्षमाथिका छन्। अहिले फेरि खोप अभियान थालेको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख भण्डारीले बताए।
मुस्ताङमा पानी पर्न नरोकिएकाले खोप मात्रै होइन, अन्य स्वास्थ्य सामाग्री ढुवानीमा पनि समस्या भएको टुकुचेका अहेब सविनले बताए।
उनले भने, ‘एक हप्तादेखि पानी परिरहेको छ, बाढीले सबै ठप्प छ।’
सबै तस्बिरहरू सौजन्य: सविन खत्री/मुस्ताङ
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ३, २०७८, ०६:०८:००